Xisbiga ANC oo ka shiraya Zuma - BBC News Somali
Xisbiga ANC oo ka shiraya Zuma
Xubnaha hogaaminta ee ugu sarreeya xisbiga haya tala koofur afrika ee ANC ayaa yeelanaya kulan ay uga arrinsanayaan go'aankii ka soo baxay maxkamadda ugu sarraysa waddankaas ee dhigayey in madaxweyne Jacob Zuma uu celiyo qayb ka mid ah malaayiin doollar oo uu ku dayactirtay guri isaga u gaar ah oo dhul weyn ku fadhiya oo ku yaalla miyiga gobolka kwa zulu natal.
Waxay kaloo wasaaradda maaliyadda siisay inay 60 maalmood ku soo cayinto xaddiga lacagta uu madaxweynuhu dib u celinayo, waxaana markan lagu eedeynayaa madaxweyne zuma inuu dhegaha ka furaystay baaq hore oo ahaa inuu celiyo lacagta oo ah canshuurta dadka laga qaaday.
Haddaba sidee loo fasiri karaa go'aan noocan ah oo ka dhan ah madaxweynihii waddanka oo ay soo saartay maxkamadda dalka ugu sarraysa. Su'aashaas iyo qaar kale ayaan hor dhignay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid o ka faallooda arrimaha caalamka. wuxuu u waramay Faarax Lamaane.